"Waxkasta Waa La Dhammeeyay, Heshiiska Zidane Ee PSG Deg-Deg Ayaa Loogu Dhawaaqayaa, Soo Dhawaw Zizou" - Laacib
HomePSG“Waxkasta Waa La Dhammeeyay, Heshiiska Zidane Ee PSG Deg-Deg Ayaa Loogu Dhawaaqayaa, Soo Dhawaw Zizou”
Iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay soo xoogaysanayeen wararka tababaraha shaqo la’aanta ah ee Zinadine Zidane la xidhiidhinaya kooxda Paris Saint-Germain ayuu haatan dabka kusii shiday inaadeerka madaxweynaha kooxdaas ee Nasser El Khelaifi.
Khalifah Bin Hamad Al Thani ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in Paris iyo tababare Zidane ay heshiis buuxa gaadheen isaga oo intaas ku daray in qandaraaska tababarihii hore ee Real Madrid si dhakhso ah loogu dhawaaqi doono.
“Arrimuhu way sal-dhigteen, si dhakhso ah ayaa loogu dhawaaqayaa, soo dhawaw Zezo” ayuu bartiisa Twitter-ka ku yidhi Khalifah Bin Hamad Al Thani.
Sidoo kale Al Thani ayaa isla Twitter-kiisa soo dhigay sawirka Zidane isaga oo kusoo dul qoray qoraal kooban oo ah “Habeen wanaagsan.”
Waxa xusid mudan oo ay tahay in laga warqabo in Khalifah Bin Hamad Al Thani uu horeba dhawr saxeex oo waaweyn oo ay PSG samaysay usii shaaciyay kahor inta aan rasmi laga dhigin waxaana kamid ah heshiisyadii Kylian Mbappe iyo Lionel Messi.
Zidane ayaa ah mid lala xidhiidhinayay shaqada tababarenimo ee PSG tan iyo markii ay Man United caydhisay Ole Gunnar Solskjaer. Ilo-wareedyo kala geddisan ayaa sheegaya in Red Devils ay bar-tilmaameedkooda koowaad ka dhigteen macalinka Paris ee Mauricio Pochettino.
Man United ayaa ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan doonaysa magacaabista tababare kumeel gaadh ah waxaana qarka u saaran shaqadeeda tababaraha ree Germany ee Ralf Rangnick.